Stay at Home ကို အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ထိ သက်တမ်းတိုးပါသလား – H2Oupdatenews
Stay at Home ကို အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ထိ သက်တမ်းတိုးပါသလား
oungmarine11@outlook.com 23/10/2020	No Comments
လွန်စွာနေပူသော တနေ့သ၌ ကျွနု်ပ်နှင့် မိတ်ဆွေတစ်စုတို့သည် နိုင်ငံတော်အမှတ်အသားပါ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောင်ကို အကြောင်းပြုပြီးသကာလ လက်လှမ်းမီသမျှ အွန်လိုင်းတစ်ခွင် ပြဲပြဲစင် ရှာကြ ဖွေကြရင်း အလုပ်ရှုတ်လျှက်ရှိလေသည်။
“ အိုင်ဆေး အိုင်ပီအောင်သင်း … ဒီစာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အရ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ ပြီးဆုံးတဲ့ Stay at Home သတ်မှတ်ချက်ကို အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ သက်တမ်းတိုးတယ်လို့ ဆိုလိုတာပဲ ..“
“ ဒါပေမဲ့ ဒီသတင်းကို နိုင်ငံတော်အဆင့် Covid-19 ကာ-ထိန်း-ကု ကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ နိုင်ငံ ပိုင်သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြတာ မတွေ့ရဘူး .. ဘယ် Main Stream Midea မှလဲ ရေးတာမတွေ့ရဖူး၊ အိုင်ပီ လက်ခုံဖြစ်လိုက် လက်ဝါးဖြစ်လိုက် ကိုကိုကြီးရ .. “
“ အိုင်ဆေး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ Myanmar Digital News ( MDG ) ရေစာ အမှတ်အသား ပါနေတယ်ဗျ။ MDG မှာ ဝင်ကြည့်တော့လဲ မတွေ့ဘူး ဗျ …. “ ဟု စုံထောက်စိန်လှက အသံပြာပြာလေးဖြင့် ပြောဆိုလေ သည်။
ထိုစဉ် ပြာတာလေးမောင်ညိုက အခန်းအတွင်း သုတ်သီးသုတ်ပြာ ဝင်ရောက်လာပြီးလျှင် …
“ အိုင်ပီတို့ရေ .. စကိုင်းဖိုင်းယားပြီဗျ .. လမ်းထိပ်က ထမင်းဆိုင် အဒေါ်ကြီးတော့ သူ့ ဟင်းအိုး တွေ သွန်ပစ် နေပြီ.. အောက်တိုဘာ ၂၀ Stay at Home ပြီးပြီဖြင့် ပြီးပြီ.. မပြီးသေးဘူး သက်တမ်းတိုးတယ်ဖြင့်လဲ တိုးတယ် ပေါ့၊ ပါဆယ်ပို့မဲ့ ကလေးတွေ လခနဲ့ ကျွေးထားဖို့ ရှိသမျှ လက်ကောက်တွေ ပေါင်ရတာလဲ ကုန်ပြီ..ခုလိုကြီး ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ ပါဆယ်ပဲ ရောင်းရမလိုလို.. ဆိုင်ထိုင်လက်ခံမိရင်လဲ ဘေးစီနဲ့ တွေ့ရင် ကော့နေဦးမယ် .. တဲ့ မေတ္တာတွေ ပို့နေလတ်ထာဗျာ.. .. “
“ ဟာ ဒီတိုင်းဆို မဖြစ်ဖူး .. ကိုင်း … ကားတွေ ထုတ်ကြဗျာ ၊ လိုလိုမယ်မယ် သနပ်တွေ ယူခဲ့ကြဗျာ ထမင်းနဲ့ နယ်စားရအောင် .. “
“ ကားတွေလဲ တစ်စီးမှ မရှိဖူးဗျ .. မဲဆွယ်လှည့်တာတွေ သွားကြည့်ဖို့ အကုန် ယူသွားကြပြီ.. “ ဟု အိုင်ပီ တင်ဝင်းက မဲ့ကာ ရွဲ့ကာ ပြောလိုက်လေသည်။
သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ ..
Previous Previous post: မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကံာတို့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို ဝယ်သူရန် ကြိုးစားနေဟု ဆို။ နီပေါက ကာကွယ်ဆေး ကြိမ်ရေပမာဏ ၂ သန်း ဝယ်ယူရန် စာချုပ် ချုပ်။ အမေရိကန် နှင့်ဥရောပနိုင်ငံများကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကာကွယ်ဆေး BANCOVID ကို ဝယ်ယူလိမ့်မည်ဟု ပြော
Next Next post: မြန်မာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာလ Lockdown တားဆီးပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် မြို့တော်ဆင်းရဲသားများ အငတ်ဘေးဆိုက်ဟု နိုင်ငံတကာမီဒီယာတို့ဖော်ပြ၊ ကိုယ်တိုင်နှင့် မိသားစုအသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် လိင်အလုပ်သမဘဝသို့ ဇွတ်အတင်း တွန်းပို့ခံရသလို ဖြစ်နေဟုဆို
Total Visits: 36,891
Total Visitors: 12,288